Otú iji tọgharịa iTunes n'ọbá akwụkwọ na-enweghị adịkwa metadata ma ọ bụ ndepụta ọkpụkpọ
Gị iTunes Library bụ ihe ọ bụla ma a nchekwa data nke music na listi ọkpụkpọ ka i kere. Specific ọmụma na-echekwara na na iTunes Media nchekwa. Mgbe ị na-tọgharịa ma ọ bụ hichapụ a nchekwa, iTunes ga-ike dị ọhụrụ na-ihe efu oyiri mgbe ngwa na meghere ma e nwere niile ohere na listi ọkpụkpọ, Fim nke songs, ihe na-album nkà nwere ike furu efu na usoro.
Part1: Nsogbu na i nwere ike na-ezute mgbe resetting ihe iTunes n'ọbá akwụkwọ
Part2: Olee na-aga banyere resetting iTunes-enweghị ihe ize ndụ nke adịkwa listi ọkpụkpọ na ndị ọzọ na bara uru data?
Part3: The ngwa ngwa na ụzọ dị mfe iji tọgharịa iTunes n'ọbá akwụkwọ na-enweghị adịkwa metadata ma ọ bụ listi ọkpụkpọ.
Ndị mmadụ na-n'okpuru echiche ka ha wee nwee ihe bara uru ohere nchekwa mgbe ha imelite ha ugbu a iDevice ka iOS 8. The isi nsogbu na ha pụrụ iche ihu mgbe resetting bụ:
The music playlist na collection nwere ike inwe na-esogbu. Mgbe resetting, o kwere omume na ozi na dum albums na nka wee gaa na-efu. Ọtụtụ ihe nwere ike na-ụkwụ gbanyụọ ngwaọrụ ma ụfọdụ albums pụrụ nanị Njirimara nke mbụ tracks nke onye album na ike nwere ike na-efu.
iTunes nwere ike ugboelu mgbe ị mmekọrịta ya na iDevice.
E nwere ike ịbụ nsogbu ebe i nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe duplicated.
Ị gaghị enwe ike ka mmekọrịta album nkà gị iDevice n'ụzọ ziri ezi.
Ọzọ ọsọ nsogbu chere ihu bụ na iTunes nēche ina rapaara na 'eche ihe idetuo' na 'na-eche maka mgbanwe-mere' nzọụkwụ. Ọrụ nwere ike na-eche maka awa ebe a.
Ụfọdụ ndị siiri ya ike mgbe upgrading ka iOS 8 dị ka ha enweghị ike ka mmekọrịta faịlụ na iTunes n'okpuru Wi-Fi mode ọnọdụ.
Ị ga-enwe iji wuchaa a ndabere nke music n'ọbá akwụkwọ ka a eluigwe na ala Oghere Usoro bọs disk ma ọ bụ a ike mbanye, externally
Mbupụ na listi ọkpụkpọ na XML format faịlụ na-azọpụta ha.
Mepee iTunes na ike a ọhụrụ n'ọbá akwụkwọ.
Tinye a ọbá akwụkwọ ọhụrụ ka iCloud site iTunes egwuregwu na-eche maka usoro ịrụcha.
Họrọ 'Update iTunes egwuregwu' si menu mmanya nke iTunes na ihichapụ 999 songs na oge. Adịghị gafere na ọnụ ọgụgụ. Ị nwere ike ikwugharị nzọụkwụ ruo mgbe n'ọbá akwụkwọ na-aghọ efu.
Mgbe usoro na-okokụre, hichapụ ihe niile listi ọkpụkpọ na ide iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Mgbe ị na-tọgharịa ma ọ bụ imelite listi ọkpụkpọ na iTunes, e nwere ohere na ị pụrụ imesị ihichapụ ụfọdụ listi ọkpụkpọ mmadụ na mberede. Ịnwere ike ịtọgharịa ma weghachi site dochie iTunes Library.itl na a faịlụ nke bụ okenye. Ọ bụrụ na ị tọgharịa ma ọ bụ kwalite ọbá akwụkwọ ahụ ihe oge ụfọdụ, mgbe ahụ, i nwere ike ịhụ na-ehichapụ playlist na iTunes mgbe niile. The kasị mma ngwá ọrụ ebe a bụ iji weghachi listi ọkpụkpọ site na iPod, iPhones ma ọ bụ iPads na
Nyefee gị data gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod azụ n'ime gị iTunes.
Mmekọrịta na nyefee gị iTunes n'ọbá akwụkwọ gị Android ngwaọrụ.
Nke a ngwá ọrụ dị ike ga-enyere gị iji tọgharịa na weghachite listi ọkpụkpọ na iTunes na ị ga-enwe ike nyefee ndị a anatara gị niile iDevices ọ bụrụ na ị enwewo ike ka mmekọrịta na listi ọkpụkpọ na iTunes n'ihu gị ehichapụ ha.
Iji malite usoro,
Jikọọ iOS ngwaọrụ gị na kọmputa.
Download na wụnye TunesGo na kọmputa gị.
Jikọọ iOS ngwaọrụ listi ọkpụkpọ na PC gị na na ẹkedori TunesGo. Ọ ga-akpaghị aka ịchọpụta a akpan akpan na ngwaọrụ ma ga-egosipụta ya na isi window na ndị niile na ihe ọmụma bụ isi. TunesGo-akwado ndị niile iPhone 5 ụdị, iPad minis na iPod Touch ụdị.
Ị ga-enwe na-ele listi ọkpụkpọ na-ekpe nke bụ isi window.
Pịa ha iji lelee zuru ezu udi.
Họrọ ndepụta na ị chọrọ na pịa na triangle, 'Mbupụ na' ma họrọ 'Mbupụ na iTunes Library'. Ọganihu mmanya ga na-ị na-emelite na nrụpụta.
Mweghachi nke iTunes na resetting ga-ezu n'ụzọ dị otú a na ị nwere ike ịlele playlist ozugbo ọ na-eme. The Fim nke ihe na play adabere niile ga-agafere iTunes ndabara si iOS ngwaọrụ.
Olee otú Tranfer iTunes eBooks ka Android
> Resource> iTunes> otú iji tọgharịa iTunes n'ọbá akwụkwọ na-enweghị adịkwa metadata ma ọ bụ ndepụta ọkpụkpọ